Aragtida Carewell, Maqalka, Faa'iidada LASIK | Carewell SEIU 503
Ku darso noloshaada wax cad.
Soo Koobid Dheef
Caymiska Carewell SEIU 503 + Dhegeysiga wuxuu siiyaa marin u helka adeegyada aragtida iyo maqalka bilaa qiimo bille ah.
Faa'iidooyinka aragga waxaa caymiya Ameritas iyada oo loo marayo Shabakadda Xulashada VSP. Ma jiro wax lacag ah oo laga qaado imtixaanka sanadlaha ah haddii aad adeegsatid adeeg bixiye shabakadeed. Haddii adeeg bixiyuhu uusan si toos ah biil ugu soo dirin Ameritas, waxaad u baahan doontaa inaad hore u bixiso oo aad soo gudbiso lacag celinta. Dib u eeg dulmarka faaiidada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Gargaarka maqalka waxaa laga heli karaa Ameritas SoundCare. SoundCare kuma xirna shabakad. Waxaad u tagi kartaa adeeg bixiye kasta. Waxaad xaq u leedahay ilaa $75 gunno 12-kii bilood ee baaritaanka maqalka oo dhameystiran. Waxay u badan tahay inaad ubaahantahay inaad horay ubixiso adeegyada aadna gudbiso lacag celinta. Dib u eeg dulmarka faaiidada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Faa'iidooyinka LASIK waxaa laga heli karaa Ameritas LASIK Advantage. LASIK Advantage kuma xirna shabakad. Waxaad u tagi kartaa adeeg bixiye kasta. Faa'iidada ugu badan ee noloshaada ee aad uqalanto inaad hesho ilkiiba waa $500. Waxay u badan tahay inaad ubaahantahay inaad si hordhac ah ubixiso adeegyada oo aad udiyaariso lacag celinta. Dib u eeg dulmarka faaiidada si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee La Ogaado
Aragtida 'Carewell SEIU 503 Vision', Maqalka, iyo LASIK waa lacag-la'aan bilaash ah shaqaalaha daryeelka guriga ee u qalma iyo shaqaalaha taageerada shakhsiyeed - ma jiro biil biil ah oo aad adigu bixiso.
Markaad u-qalanto, waxaad kuheli doontaa caymiska qorshaha Ameritas.
Xubnaha qoyska laguma dari karo qorshahan.
Uma isticmaali kartid Kaarka Fududeynta Faa'idada inaad ku bixiso wixii kharash ah ee la xiriira dheefahaaga Dhegeysiga +
Hubi U-qalmitaankaaga Aragtida + Faa'iidooyinka Maqalka
Si aad isla markiiba u ogaato u-qalmitaankaaga, ka jawaab dhawr su'aalood oo ku saabsan su'aalaha u-qalmitaanka.
Si aad xaq ugu yeelatid faa'iidooyinka Barnaamijka Daryeel SEIU 503 Ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha waa inaad:
Ku shaqee 40 ama in ka badan saacadood bishii oo ah saacado shaqo oo u qalma - oo sidoo kale loo yaqaanno saacadaha qaybta gorgortanka - laba bilood oo isku xigta. Ka dib waxaa jira hal bil sugitaan inta saacadahaaga loo soo sheegayo Xafiiska Maamulka Faa'idooyinka.
Si joogto ah u soo beddel waraaqahaaga iyo / ama foojarrada mushaharka
Magacaaga, jinsigaaga, Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuriti, taariikhda dhalashadaada iyo cinwaankaaga hadda ha ku yaal xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka. Halkan guji si aad u cusboonaysiiso macluumaadkaaga hadda.
R numbe The wakhtiga shaqada ee u qalma waxaad u baahan tahay inaad u qalanto gargaarka Carewell yihiin saacadaha shaqada ee ay bixiso toosiyaan, DHS iyo / ama PPL ka wakiil ah aad macaamiisha.
Haddii aad tagto laba bilood oo isku xigta adiga oo aan shaqeynin (ama haddii saacado eber la soo sheego), ka dib muddo nimco ah oo hal bil ah uma qalmi doontid dheefaha Ilkaha, Aragtida + Maqalka, iyo Barnaamijka Gargaarka Shaqaalaha. Si dib loogu helo u-qalmitaanka manfacyada Carewell SEIU 503, waa inaad dhammaystirtaa tallaabooyinka kore.
Haddii aad su'aalo ka qabtid u-qalmitaankaaga fadlan ka wac Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka 1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3, ikhtiyaarka 2
Faa'iidooyinka ilkaha, Vision + Dhageysi, iyo Barnaamijka Taageeridda Shaqaalaha ee la fadhiisin doonaa si toos ah kuu aad mar:
la kulan Shuruudaha U-qalmitaanka ee kor lagu sharaxay;
cusboonaysiiso Benefits Xafiiska Maamulka iyo State oo la magacaaga, jinsiga, Number Security Social iyo cinwaanka hadda.
Mar alla markii aad u-qalantid dheefaha Carewell SEIU 503 Aragtida + Maqalka, waxaa laguu soo diri doonaa aragga, maqalka, iyo kaararka LASIK oo ku jira baqshad weyn oo cad.
Aragtida: Shabakadda Xulashada VSP
Maqalka: Laguma xidhin shabakad
LASIK: Kuma xirna shabakad
Hubso inaad xaqiijiso in aragtiyahaagu kujiro shabakad kahor intaadan adeegyo raadsan si taxaddar lehna ufiirin soo koobitaanka dheefaha ee macluumaadka kusaabsan kharashaadka suurtogalka ah ee jeebabka sida lacag-bixinta iyo wada-bixinnada caymiska. Carewell SEIU 503 dib kuuguma soo celin doono kharashyada dheeraadka ah mana u isticmaali kartid Kaarka Waxtarka Faa'iidada ee aragga ama maqalka, marka ka hubso bixiyahaaga nidaamyada aan si buuxda loo daboolin.
Raadi adeeg bixiye
Ka hel adeeg bixiye Shabakadda Xulashada VSP adoo aadaya websaydhada VSP ee vsp.com/eye-doctor ama soo wac 1-800-877-7195.
Waxaad u tagi kartaa bixiye kasta ama xarun adeegyo maqal ah! Ma jiro shabakad ku xidhan dhegeysiga. Waxay u badan tahay inaad ubaahantahay inaad bixiso hormaris aadna gudbiso lacag celinta.
Waxaad u tagi kartaa adeeg bixiye ama xarun kasta oo loogu talagalay adeegyada LASIK! Ma jiro shabakad ku xidhan faa iidada LASIK. Waxaad u baahan tahay inaad horay ubixiso oo aad soo gudbiso lacag celinta.
Uma baahnid inaad dib- u-dalbato - illaa iyo intaad laba billood oo isku xigta ka maqnaato adiga oo aan lahayn saacado shaqo oo u qalma (ama soo sheega saacado eber ah) waxaad xaq u yeelan doontaa dheefaha Barnaamijka Ilkaha, Aragtida + iyo Dhageysiga. Maheli doontid kaarar cusub sanad walba.
U-qalmitaanka oo luma
Haddii aad tagto laba bilood oo taariikhi ah oo xiriir ah oo aan lahayn saacado shaqo oo u qalma (ama soo sheegida saacado eber ah), ka dib muddada fadliga ah ee hal bil kalandarka ah xaq uma yeelan doontid dheefaha Barnaamijka Ilkaha, Aragtida + iyo Dhageysiga, iyo dib u heshay u-qalmitaankaaga.
Haddii aad lumiso u-qalmitaanka, waxaad iska qori kartaa caymiska sii socoshada ee COBRA. La xiriir Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka wixii macluumaad dheeraad ah.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad ka baxdo dheefaha Barnaamijka Ilkaha, Aragtida +, iyo Gargaarka Shaqaalaha waxaad buuxin kartaa foomka ka-dhaafitaanka.
Foomka Ka-dhaafida Faa'iidooyinka (Digital)
Haddii aad u tagto bixiye ka baxsan Shabakadda Xulashada VSP waxaad u baahan doontaa inaad hore u bixiso oo aad soo gudbiso lacag celinta. Fadlan si taxaddar leh dib ugu eeg dulmarka faa iidada leh si aad u aragto heerarka dheefaha markaad u aadeyso bixiye aragtida shabakad ka baxsan.
Foomka Magdhawga Xubinta ee VSP (PDF)
Waxay u badan tahay inaad ubaahantahay inaad hore ubixiso howlaha maqalka oo aad soo gudbiso lacag celinta.
Foomka Sheegashada Magdhawga Maqalka Ameritas (PDF)
Waxay u badan tahay inaad ubaahantahay inaad hore ubixiso adeegyada LASIK aadna gudbiso lacag celinta. Ogsoonow in foomkan loogu talagalay kaliya adeegyada LASIK, maahan adeegyada kale ee aragga sida baaritaanka indhaha sanadlaha ah, muraayadaha indhaha, ama looxyada.
Aragtida Amertias (LASIK kaliya) Foomka Dalbashada Lacag-bixinta (PDF)
La Xiriir Macluumaadka iyo Kheyraadka
Guudmarka Qorshaha Ameritas (PDF)
Halkan guji si aad u aragto dhammaan Kheyraadka Aragtida + Maqalka
Faa'iidooyinka Xafiiska Maamulka
1-844-507-7554, ikhtiyaarka 3, ikhtiyaarka 2
Sababaha loola xiriiro Xafiiska Maamulka Faa'iidooyinka:
Su'aalaha ku saabsan xaq u yeelashada Aragtida + Dhegeysiga
Ma aadan helin aragtidaada, LASIK, ama kaararka maqalka
Sababaha loola xiriiro Ameritas:
Raadi dhakhtar indhaha kuu dhow
Su'aalaha ku saabsan adeegyada / qalabka lagu daboolay qorshahan
Waxaad u baahan tahay kaar cusub
Akhriso su'aalaha guud ee kusaabsan Aragtida Carewell + Dheefta Maqalka. Ka eeg bogga Su'aalaha La Weydiiyo wixii macluumaad dheeraad ah.
Waxaad ku booqan kartaa bogga VSP ee vsp.com/eye-doctor ama wac 1-800-877-7195.
Ma ku dari karaa xaaskeyga ama xubnaha kale ee qoyska?
Maya. Macaashka Carewell SEIU 503 waxaa loo heli karaa oo keliya daryeel-caafimaadeedka guriga iyo shaqaalaha taageerada shakhsi ahaaneed.